Kulamo aan loo dhameyn oo ka socda Villa Somalia iyo war ka soo baxay Madaxtooyada – Hornafrik Media Network
Kadib markii toddobaadkii hore Madaxyooyada Villa Soomaaliya ay ku kulmeen xisbiyada ugu waa weyn ee dalka ka jira iyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa in badan dadkii ka deyrinaye xaalada dalka iyo guud ahaan siyaasada ku wajahan doorashada 2021 waxeey dareemeen in cagta la saaray dhabihii lagu heli lahaa in doorasho wadanka ka dhacdo,lagana baaqsado muddo kororsi ayaa haatan waxaa soo baxaya in wali la isku dhagan yahay oo isfaham buuxa uusan jirin.
Sida ay sheegayaan Wararka la helayo Madaxweyne Farmaajo ayaa dalbaday in si wadajir ah uu arrimaha doorashada 2021-ka ugala hadlo dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee dalka jira, balse inta badan xisbiyada waa weyn waxaa ay diideen casuumaada Madaxweynaha.
Xisbiyada kala ah Himilo Qaran, UPD, Ileys, Hor u Socod Qaran, Wadajir iyo Kulan oo ay hoggaamiyaan siyaasiyiin caan ah ayaa diiday kulanka Madaxweynaha waxaana ay sabab uga dhigeen in Madaxweynaha toddobaadkii hore ay la kulmeen markalena aysan dooneynin.
Xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir ee uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaan isago marnaba la kulmin madaxweynaha, waxuuna xisbigaas qoraal uu soo saaray Farmaajo uga dalbaday inuu shacab hor yimaado kana hor sheego in doorashada waqtigeeda ay ku dhaci doomnto maalina aysan kororsiimo jiri doonin.
Sidoo kale xisbiga Wadajir ayaa la kulanka madaxweyne Farmaajo shuruud uga dhigay inuu raali galin ka bixiyo weerarkii 17-kii Dec. Sanadkii hore lagu qaaday xarunta Xisbiga ee magaalada Muqdisho halkaas oo lagu dilay ilaa lix ruux.
Wararkii ugu dambeeyay ee aan ka heleeno Villa Somalia ayaa tilmaamaya in halkaas ay ku kulansanyihiin madaxweyne Farmaajo iyo qaar ka mid hoggaanka xisbiyada siyaasadeed ee dalka walow ay qaadaceen inta badan xisbiyada waaweyn ee dalka.
Agaasimaha xaafiiska warfaafinta ee Madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada ku cadeeyay inuu haatan kulan u socdo xisbiyadaas iyo madaxweyne Farmaajo.
“Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haatan kulan kula qaadanaya Villa Soomaaliya qaar kamid ah Xisbiyada Siyaasadeed ee Kumeel Gaarka ah ee ka diiwaangashan Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka.
Kulamadan ayaa looga gol leeyahay in Madaxweynuhu uu wada-tashiyo ballaaran la qaato saamileyda siyaasadeed ee Soomaaliya, lagana wada hadlo sidii doorasho qof iyo cod ah oo waqtigeeda ku qabsoonta looga hirgelin lahaa dalka” ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdinuur.
Mucaaradka oo qaadacay doorasho berri ka dhacaysa dalka Tanzania